मनोरन्जन | Ekhabaronline.com | Page 7
चलचित्र ‘बेफिक्रे’ प्रदर्शनमा आयो
काठमाडौं: रणवीर सिंह, वाणी कपुरलगायत अभिनित चलचित्र ‘बेफिक्रे’ प्रदर्शनमा आएको छ । यसले प्रदर्शनको पहिलो दिन नै बक्स अफिसमा १०.३६ करोड कलेक्सन गरेको छ । चलचित्र नयाँ पुस्ताका दर्शकलाई [पूरा पढ्नुहोस्]
व्यापारिक हिन्दी चलचित्र मन नपराउने बिपीसँगको अन्तर्वार्ता
सङ्गीतका बारेमा केही भन्नुहुन्थ्यो कि? बीएमा नपुगन्जेल सङ्गीतप्रति निस्पट्ट नै थिएँ। म बनारसमा हुँदा एक जना महाराष्ट्रका मेरा सहपाठी सङ्गीतप्रति खुबै रुचि राख्तथे। उनी आफै राम्रा गायक र [पूरा पढ्नुहोस्]
चलचित्र ‘सेतो सुर्य’ र ‘पार्सल’ को प्रदर्शन शुरू
काठमाडौं, मंसीर २४: यो शुक्रबारबाट दुई नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्। दिपक रौनियार निर्देशित फिल्म ‘सेतो सुर्य’ र रविन श्रेष्ठ निर्देशित ‘पार्सल’ सार्वजनिक भएका हुन्। ‘सेतो सुर्य’ले [पूरा पढ्नुहोस्]
भारतीय हास्य अभिनेता कपिलको पारिश्रमिक किन ११० करोड
मुम्बई, मंसिर २४ ‘द कपिल शर्मा शो’बाट चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा भारतिय टिभीका सबैभन्दा महँगा कलाकार हुन्। एक चर्चित भारतिय पत्रिकाका अनुसार हाल उनी काम गरिरहेको टिभीले पारिश्रमिकमा [पूरा पढ्नुहोस्]
अल बिदा ! आर पी भट्टराई
काठमाडाैं, मंसीर २४ः ‘राजालाम’ नामबाट चर्चित रहेका कलाकार आर पी भट्टराईको निधन भएको छ। चर्चित हास्य टिभी श्रृखंलाबाट ‘राजालाम मेरो नाम’ संवादका लागि चर्चित भट्टराई बिहान सुतिरहेको [पूरा पढ्नुहोस्]
‘यो साइनो मायाको’ टिजर ट्रेलर रिलिज (भिडियो सहित)
काठमाडौँ , मंसीर २३ फिल्म ‘यो साईनो मायाको’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । यसै बर्ष प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी गरिएको फिल्मक टिजरलाई युट्युव मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । म्युजिकल टिजरले फिल्म [पूरा पढ्नुहोस्]
करिनाको ‘गर्भवती’ फोटोसुट
काठमाडौं– करिना कपुरको बच्चा जन्माउने दिन नजिकँर्दै गर्दा गर्भवती अवस्थाको फोटो सुट गरेकी छिन् । एम म्यागजिनका लागि उनले बुधवार फोटो सुट गराएकी हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यामका अनुसार [पूरा पढ्नुहोस्]
जेठसम्म बक्स अफिस लागु गर्ने तयारी
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले बक्स अफिस प्रणाली लागु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । निर्वाचनमा आफ्नो मुख्य ‘एजेन्डा’ नै बक्स अफिस बनाएका बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईले [पूरा पढ्नुहोस्]
रामचन्द्र काफ्लेको ‘हुन्न रिसाउन’ (भिडियो सहित)
काठमाडौं । गायक रामचन्द्र काफ्लेको ‘हुन्न रिसाउन’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । चिरञ्जीवी न्यौपानेको शब्द रहेको गीत संगीत विष्णु न्यौपानेको छ । हिम सम्झौता डिजिटल कम्पनीले बजार [पूरा पढ्नुहोस्]
‘वान टेक’ मुभी ‘जालो’ अब एडिटिङ रुममा
काठमाडौं । ‘वान टेक’ मुभी ‘जालो’ र ‘जालो रिटन्र्स’ एडिटिङ रुममा पुगेको छ । एक टेकमा चार घण्टा लामो दुई वटा चलचित्र छायांकन गरिएको थियो । “एक टेकमै छायांकन गर्नु पर्ने भएकोले यसलाई दृश्य [पूरा पढ्नुहोस्]